रूसी कवि Apollon Grigoryev: जीवनी, रचनात्मकता
कारण बिना 19 औं सताब्दी रूसी कविता को सुनको उमेर भनिन्छ। यस समयमा, हामी जसलाई बीच Apollon Grigoriev थियो, शब्द को धेरै ठूलो कलाकार सिर्जना गरियो। आफ्नो जीवनी, यस लेखमा उल्लिखित तपाईं यो प्रतिभाशाली मानिसको बारेमा एक सामान्य विचार दिन हुनेछ। Apollon Aleksandrovich Grigorev (जीवन को वर्ष - 1822-1864) रूसी कवि, अनुवादक, थिएटर र साहित्यिक आलोचक, memoirist रूपमा चिनिन्छ।
मूल ए ए Grigoreva
Apollon Aleksandrovich जुलाई 20, 1822 मा मास्को मा जन्म भएको थियो। आफ्नो हजुरबुबा टाढाको प्रान्त बाट काम गर्न मास्को आएका थिए जो एक किसान थियो। को नागरिक सेवा जब आफ्नो मेहनत लागि यो मानिस knighthood पाए। आफ्नो बुबा लागि जाँदा Apollon Grigoriev, उहाँले आमाबाबुको इच्छा आज्ञा उल्लङ्घन र serf चालक छोरी संग आफ्नो जीवन लिङ्क। आफ्नो छोरा को जन्म पछि मात्र एक वर्ष अपोलो आमाबाबुले विवाह, त्यसैले भविष्यमा कवि एक बिहे नभएको बच्चाको रूपमा मानिन्छ थियो। अपोलो Grigoriev उहाँले titular सल्लाहकार श्रेणी हुँदा मात्र 1850 मा व्यक्तिगत आचरण प्राप्त गर्न व्यवस्थित। महान शीर्षक यसरी पुनःस्थापित गरिएको।
प्रशिक्षण को अवधि, पुरोहित काम
भविष्यमा कवि घरमा शिक्षित थियो। यो उसलाई उच्च विद्यालय पारित, मास्को विश्वविद्यालय तुरुन्तै कदम चाल्न सक्षम भयो। यहाँ, व्यवस्थाको स्कूल मा, उहाँले एम पी Pogodina, टी एन Granovskogo, सपा Shevyreva र अरूको लेक्चर उपस्थित। हाम्रो नायक सँगी विद्यार्थी हां। पी Polonsky र ए ए Fet थियो। तिनीहरूलाई जवान कवि आपसमा आफ्नो काम पढ्न जसमा साहित्यिक सर्कल संगठित छ। 1842 मा उहाँले विश्वविद्यालय Apollon Aleksandrovich को स्नातक। कि पछि, त्यो पुस्तकालयमा काम गरे, र त्यसपछि बोर्ड को सचिव भए। तथापि, Grigoriev पुरोहित काम दिइएको थिएन - उहाँले लापरवाहीसंग थियो प्रोटोकल, पुस्तकहरू को वितरण तिनीहरूलाई दर्ता गर्न बिर्सन्छन्।
1843 देखि Apollon Grigoriev प्रकाशित गर्न थाले। आफ्नो कविता धेरै सक्रिय अवधि मा ए एफ Korsh लागि यो unrequited भावना योगदान 1845 मा 1843 देखि देखा छन्। spontaneity र unbridled भावना, घातक आवेग, प्रेम-कुस्ती - गीत को को धेरै विषयवस्तुहरू Grigorieva ठीक यो प्रेम नाटक बताए। यो अवधिमा जहाँ अराजकता रोमान्टिक भावनाहरू ठाउँ कवि प्रक्रियाहरू संग तुलना कविता "पुच्छलतारा" छ। यी भावनाहरू पहिलो संरचना गद्य अपोलो Alexandrovich, एक डायरी को रूप मा गरे मा उपस्थित छन्। काम (1917 मा प्रकाशित 1844 मा लिखित,) "पांडुलिपि roving sophist को पन्ने" भनिन्छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा आफ्नो जीवन को वर्ष
प्रेममा एक निराशा पछि तहसनहस ऋण द्वारा दबाउने, Grigoriev नयाँ जीवन सुरु गर्ने निर्णय गरे। उहाँले गोप्य सेन्ट पीटर्सबर्ग, उहाँले कुनै मित्र थियो जहाँ गए। 1844 देखि 1845 को अवधि मा Grigoriev सीनेट मा र परिषद decorum सेवा, तर त्यसपछि लेखन गर्न सबै आफ्नो समय समर्पित गर्न सेवा छोड्न निर्णय गरे। Grigoriev नाटक र कविता, र गद्य र नाटक र साहित्यिक आलोचना लेखे। 1844-1846 GG मा। Apollon Aleksandrovich को संग collaborated छ "मुग्ध पार्ने संगीतको र Pantheon।" पत्रिकाको एक लेखक रूपमा यसको गठन गरे। उहाँले थिएटर को विषयमा महत्वपूर्ण लेख, प्रदर्शन को समीक्षा, साथै (1845 मा) पद "दुई स्वार्थ" मा कविता र नाटक धेरै प्रकाशित गरेको छ। "भविष्य को मानिस", दोस्रो - - त्यसपछि आफ्नो ट्रिलजी, जो पहिलो आए "Vitalina मेरो परिचय" र अन्तिम - "Ophelia"। Apollon Grigoriev पनि अनुवाद संलग्न थियो (वहाँ "Sophocles को Antigone" 1846 मा, थिए "को लागि पति Moliere स्कूल" र अन्य काम)।
Grigoriev उहाँलाई नयाँ आदर्श र स्नेह बाहिर खोज्न, एक चरम अर्को गर्न हतार गर्न, विश्वास परिवर्तन गरे भनेर एक उदार प्रकृति थियो। 1847 मा, सेन्ट पीटर्सबर्ग मा निराश, उहाँले मास्को फर्के। यहाँ उहाँले अखबार "मास्को शहर पात" सहयोग गर्न थाले। यो अवधिको काम बीचमा, यो उल्लेख गर्नुपर्छ4लेख Grigorieva "Gogol र आफ्नो नवीनतम पुस्तक," 1847 मा सिर्जना गरियो।
त्यसै वर्ष मा, Apollon Aleksandrovich गाँठ बाँध। Apollon Grigoriev पत्नी ए एफ Korsh को बहिनी थियो। चाँडै तथापि, कारण यसको frivolous आचरण गर्न विवाह रद्द भएको थियो। Grigoryev फेरि मानसिक वेदनामा र निराशाले को अवधि थाले। यो अवधिमा थुप्रै काम गर्दछ, कवि जीवन, शायद पत्नी Apollona Grigoreva र उनको frivolous व्यवहार लागि भने सिर्जना हुनेछ गरिएका। यस समयमा, Apollon Aleksandrovich हकदार एक कवितात्मक चक्र प्रकाशित "प्रेम र प्रार्थना को डायरी।" 1879 मा, त्यो सम्पूर्ण यो चक्र, उहाँले Apollon Grigoriev मृत्यु पछि प्रकाशित भएको थियो। यसलाई मा राखिएको कविता उनको लागि सुन्दर नौलो र unrequited प्रेम गर्न समर्पित छन्।
शिक्षा, Grigoriev आलोचक
1848 देखि 1857 को अवधि मा Apollon Aleksandrovich एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै विद्यालय मा विधिशास्त्र नेतृत्व। एकै समयमा उहाँले पत्रिका संग collaborated र नयाँ काम सिर्जना गरियो। 1850 मा, ग्रेगरी "Moskvityanin" को सम्पादक साथी बनाए। उहाँले ए एन Ostrovskim संग "जवान सम्पादकीय कर्मचारी" संगठित। वास्तवमा, यो विभाग "Moskvityanin" को एक आलोचना भएको थियो।
एक आलोचक Apollon Grigoriev यो समयमा रूपमा थिएटर सर्कलमा एक प्रमुख आंकडा बन्नेछ। उहाँले अभिनय र playwriting मा को naturalness र यथार्थवाद प्रचार गरे। धेरै निर्माण र नाटकहरु Apollon Grigoriev सराहना। "तूफान" को बारे Ostrovsky यो मुख्य कला काम रूपमा लेखे। प्ले आलोचक को मुख्य लाभ poetically लेखक र सही रूसी राष्ट्रिय जीवन फोटो क्षमता लाग्यो। Grigoriev प्रान्तीय जीवन र रूसी प्रकृति को सुन्दरता र उत्पादनमा चित्रण गरिएको शोकमा को घटना को आकर्षण, शायद छोयो भने।
Apollon Grigoriev वाक्यांश को लेखक रूपमा चिनिने "Pushkin - सबै छ।" अलेक्जेन्डर सिर्जना, पाठ्यक्रम, उहाँले धेरै उच्च सेट। आफ्नो तर्क उहाँले अपोलो Grigoryev Evgenii Onegine बारेमा भने विशेष गरी के धेरै रोचक छन्,। आलोचकहरु उदास यूजीन peculiar रूसी अर्थमा छ जो आफ्नो प्राकृतिक निहित आलोचना, सम्बन्धित छ भन्छन्। Apollon Aleksandrovich समाज Onegin व्यापक भएको निराशा र प्लीहा लागि दोष छैन भन्नुभयो। उहाँले तिनीहरू शंका र रिस, Childe हेरोल्ड जस्तै देखि उठाउन छैन भनेर उल्लेख र giftedness को यूजीन।
1856 मा, "Moskvityanin" बन्द भएको थियो। कि पछि अपोलो Alexandrovich यस्तो "समकालीन" र अन्य पत्रिका, आमन्त्रित "रूसी कुराकानी।" तर, त्यो प्रस्ताव मात्र भने व्यक्तिगत निर्देशन महत्वपूर्ण विभाग स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ, वार्ता अन्त प्रकाशनहरू मात्र कविता, लेख र अनुवाद Grigorieva आए।
1852-57 GG मा। Grigorev Apollon Aleksandrovich unrequited प्रेम Ly विजार्ड यो समय relived। 1857 मा सबै भन्दा पद Grigorieva "हंगेरी जिप्सी" प्रसिद्ध र समावेश जो कवितात्मक चक्र "झगडा," देखा "ओह, मलाई भन कम्तिमा तपाईं मेरो साथ हो ..."। Blok यी कामहरू रूसी गीत मोती भनिन्छ।
Apollon Grigoriev, एक अभिभावक र राजकुमार आई यू। Trubetskogo को अभिभावक भयो युरोप (इटाली, फ्रान्स) गए। 1857 देखि 1858 को अवधि मा उहाँले संग्रहालयहरु भ्रमण, फ्लोरेन्स र पेरिस बस्थे। घर फिर्ता, Grigoriev 1861 देखि सक्रिय Fyodor एम एम Dostoevskie र द्वारा लाग्यौं थिए जो पत्रिका "युग" र "समय", संग सहकार्य छ, छाप्न भयो। Dostoevsky Apollonu Aleksandrovichu विकास वर्तमान पुस्ता एक संस्मरण सिर्जना सल्लाह, र त्यो अपोलो Grigoriev लगे। न्याय प्रस्तावित विषय को परिणाम - आफ्नो रचनात्मकता "मेरो साहित्यिक र नैतिक skitalchestva" समावेश छ।
दार्शनिक र सौंदर्य दृश्य Grigorieva
दार्शनिक र सौंदर्य दृश्य Grigoriev प्रभाव Slavophilism (Khomyakova) र रोमान्टिक (इमर्सनले, Schelling, कार्लाइले) अन्तर्गत गठन। उहाँले मान्छे को जीवन मा महत्वपूर्ण धार्मिक र राष्ट्रिय-पितृसत्तात्मक सिद्धान्तहरू बुझे। तर, आफ्नो काम निरपेक्ष समुदाय साहित्य बारे puritanical इन्साफ सुरु को आलोचना संग संयुक्त छ। Apollon Aleksandrovich पनि pre- र पोस्ट-Petrine अवधिको राष्ट्रिय एकता को विचार बचाव। उहाँले Westernism र Slavophilism विशेषता लागि ऐतिहासिक जीवन योजनाहरु, अमूर्त theorizing को स्कोप सीमित भनेर विश्वास गरे। तथापि, Grigoriev, incomparably यसको आदर्श स्थिरता (वर्दीधारी मानवता छाउनी) पहिचान कि Westernism कार्यक्रम भन्दा राम्रो Slavophiles एक समुदाय आदर्श अनुसार।
Grigorieva दृष्टिकोण अझ उहाँले सिर्जना जैविक सिद्धान्त को आलोचना प्रतिबिम्बित। जैविक आलोचना को धेरै अवधारणा जैविक synthetically विभिन्न जैविक जीवन सुरु embodied जुन, कला प्रकृति को समझ पारस्परिक रहेको छ। उहाँलाई अनुसार, कला - जीवन को भाग, आफ्नो आदर्श अभिव्यक्ति, वास्तविकता को बस एक प्रतिलिपि।
विशेष गरी कविता
Grigoriev गरेको कविता Lermontov को प्रभाव अन्तर्गत विकसित। Apollon Aleksandrovich आफूलाई अन्तिम रोमान्टिक भनिन्छ। संसार र आशाहीन दुःख को disharmony को मनसाय आफ्नो काम गर्न केन्द्रिय छन्। तिनीहरूले अक्सर मजा hysterical तत्व, revelry मा भन्दा फैल। यस कविता Grigorieva (शहर को विशेष गरी चक्र) कारण तीव्र सामाजिक अभिमुखीकरण गर्न धेरै प्रकाशित गर्न गाह्रो थियो। यो मात्र विदेशी रूसी प्रेस मा सम्भव थियो। धेरै unequally सामान्य मा, हामी लेखक को कवितात्मक पैतृक रुचि हो, तर विभिन्न चमक र असाधारण भावना को आफ्नो सर्वश्रेष्ठ सिर्जनाहरू।
आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्ष
Apollon Grigoriev आफ्नो जीवन लागि एक नास्तिक र रहस्यवादी Slavophile र Freemason, शत्रु-polemicist र राम्रो मित्र, binge रक्सी न पीने वाला र नैतिक व्यक्ति भएको। अन्त मा, यी सबै अचाक्ली उहाँलाई भङ्ग। Apollon Grigoriev ऋण मा विश्वास गुमाउन। 1861 मा, त्यो एक ऋणी गरेको जेलमा बाहिर बस्न बाध्य भएको थियो। कि पछि, उहाँले कोशिश अन्तिम समय ओरेनबर्ग गए जो आफ्नो जीवन, परिवर्तन गर्न। यहाँ Grigoriev को Cadet कोर मा एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर, यो यात्रा केवल कवि अवस्था exacerbate छ। साथै, फेरि त्यहाँ आफ्नो पत्नी एम एफ Dubrovskoy एक ब्रेक थियो। Apollon Aleksandrovich झन् रक्सी मा OBLIVION खोजे। ओरेनबर्ग देखि फिर्ता, यो काम गरे, तर रुकावट संग। Grigoriev कला मात्र सेवा गर्न चाहन्थे, साहित्यिक दल नजिक बचा।
मृत्यु ए ए Grigoreva
1864 मा Apollonu Aleksandrovichu एक ऋणी गरेको जेलमा दुई पटक सेवा थियो। पूर्ण थकित भावनात्मक अनुभव, द्वारा सेन्ट पीटर्सबर्ग मा एक स्ट्रोक Apollon Grigoriev मृत्यु भयो। आफ्नो जीवनी समाप्त सेप्टेम्बर 25, 1864।
Krasnitskiy यूजीन - जीवनी र काम
सार Goncharov गरेको "Oblomov" - रूसी साहित्य को सफ्टवेयर काम
"रजत राजकुमार": उत्पादन अध्याय सारांश द्वारा
Rodzhers Rozmari लेखक: जीवनी र काम
उपन्यास "Oblomov" को इतिहास। Oblomov को विशेषताहरु
"Disheveled भँगेरा": एक सारांश। "Disheveled भँगेरा" Paustovsky
अफ्रिकी सुन्तला नदी - महाद्वीप आशा र सौन्दर्य
को तत्काल चाउचाउ कि हानिकारक छ?
लोकप्रिय टाटु "उनको खुट्टा मा garter": मान, सुविधाहरू, स्केचहरू
युवा आमाबाबुको लागि सुझाव: के तपाईं एक केटा को बप्तिस्मा लागि आवश्यक?
दबाइ तैयार "Momat"। निर्देशन
किन आफ्नो मुखमा मिठाई छ?
Baikal omul। जहाँ सामान्य Baikal omul। पकाउने व्यञ्जनहरु
"पोत Grove" Shishkin - चित्रहरु विवरण
तल्लो चिबुक को अन्त मा दुखेको मसूडों: कारणहरू र उपचार। दुखेको मसूडों: के र पीडा कसरी व्यवहार गर्न
संगठनात्मक संरचना को प्रकार: मुख्य विशेषता
लामखुट्टे बाट कंगन। आश्चर्यजनक समीक्षा!